भाई विदेशमा ,बुहारीलाई जेठाजूको म्यासेजमा राखेको ​…प्रस्ताव बाहिरियो!! दाजु-भाइ आमने-सामने भएपछि भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्) – News Nepali Dainik
भाई विदेशमा ,बुहारीलाई जेठाजूको म्यासेजमा राखेको ​…प्रस्ताव बाहिरियो!! दाजु-भाइ आमने-सामने भएपछि भयो यस्तो बबाल (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७ समय: १७:४४:५७
भाई वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवईमा थिए । घरमा वुहारी एक्लै थिइन् । यहि मौकामा जेठाजु नाता पर्ने छिमेकी दाईले बुहारीलाई लेखेको म्यासेज सार्वजनिक भएपछि सबैको होस उडेको छ
Last Updated on: February 9th, 2021 at 11:38 pm
३४५८ पटक हेरिएको